DAAWO SAWIRRO: Shirka maamullada gobollada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed oo lagu soo xiray Baydhabo | HalQaran.com
DAAWO SAWIRRO: Shirka maamullada gobollada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed oo lagu soo xiray Baydhabo
Baydhabo (Halqaran.com) – Shirkan oo muddo toddobaad ah ka socdey magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay ayaa waxaa loo qabtey masuuliyiinta maamullada goballada iyo degmooyinka Koofur Galbeed Soomaaliya, waxaa soo qabanqaabisay wasaarrada arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta K/Galbeed.
Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose, Ibraahim Aadan Cali Najax oo kamid ahaa masuuliyinta shirkaasi ka qeybgaleysay ayaa warbaahinta dowladda u sheegey in shirkan u ahaa mid looga hadlayay horumarinta adeega dowliga iyo baahinta adeegyada dowlada.
Wuxuu sheegaya, sidoo kale in sigaar ah diirrada loogu saarey Shirkaasi muddada toddobaadka ah sidii cadowga maleeshiyaadka Al-Shabaab looga xorreyn lahaa gobollada ay maamusho Koofur Galbeed.
Sidoo kale, guddoomiye Najax ayaa waxa uu sheegey in shirkan aad muhiim ugu ahaa shacabka Koonfur Galbeed, una horseedi doona amni, horumar iyo nabad kuwada noolaansho.
la soo gabagabeeyay Baydhabo
Shirka maamulada gobolada Koonfur Galbeed